Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Brits: naga saar guriga oo fasax naga bax
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Dadku waxay inta badan ku xayiran yihiin gudaha bilo badan dhamaadka waxayna cilmi-baadhistani na tustay inay ka xanuunsanayaan aragtida afarta darbi.
In ka badan kala badh dadka waaweyn ee Boqortooyada Midowday ee sheegaya inay hadda ka roon yihiin sidii ay ahaan jireen ka hor faafitaanka Covid-2022 waxay isticmaali doonaan lacagta dheeriga ah si ay ugu daadiyaan fasaxa 1, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris ay maanta (Isniin XNUMX November) soo saartay WTM London.
Mid ka mid ah shantii ka mid ah 1,000kii qof ee ka jawaabaya Warbixinta Warshadaha WTM 2021 ayaa sheegay in ay ka wanaagsan yihiin sidii ay ahaan jireen ka hor-Covid, marka bixitaanadu ay sare u kaceen.
Markii la waydiiyay: "Dhaqaale ahaan, miyaad ka roon tahay mise waad ka sii xumaanaysaa tan iyo bilawgii masiibada?", badi jawaab bixiyaasha (62%) waxay yiraahdeen "isku mid"; 20% waxay sheegeen inay ka wanaagsanaayeen 18%na ay ka liitaan. Jawaab bixiyaasha waxaa la waydiistay in ay ka fiirsadaan labada daqliga soo gala iyo kuwa ka baxaya jawaabtooda.
Markii kuwii sheegay inay hadda ka roon yihiin ayaa la waydiiyay: "Maxaad u qorshaysan tahay inaad ku bixiso lacagtaada dheeraadka ah?" fasax ayaa soo baxay jawaabta ugu sareysa, iyadoo 55% ay sheegeen inay qorsheynayaan inay u isticmaalaan si ay u ballansadaan meel ka baxsan. Tirada ayaa ku dhawaad ​​laba jibaar ka badan jawaabta xigta ee ugu fiican, halkaas oo 31% kuwa ka wanaagsan kuwii hore ee COVID ay sheegeen inay ku bixin doonaan hagaajinta guriga.
Mid taxadir leh afartiiba (28%) ayaa sheegay inay "lacagta ku hayn doonaan bangiga maalin roobaad"; 26% ayaa sheegay inay ku qarashgarayn doonaan qaboojiye cusub ama wax la mid ah qaybta alaabta cad-cad iyo 21% waxay iibsan doonaan baabuur cusub. Qiyaastii 10kiiba mid, (12%) ayaa sheegay inay lacagta u gelinayaan iibsashada guri cusub.
Xitaa dhiirigelin dheeraad ah oo loogu talagalay warshadaha safarka, tiro aad u badan ayaa weli aan la go'aamin waxaana si fiican u soo jiidanaya hawl-wadeennada dalxiiska iyo meelaha ay u socdaan iyaga oo ku soo jiidanaya inay lacagtooda ku qaataan fasaxa. Kuwa yidhaahda way ka roon yihiin tan iyo markii uu COVID bilaabay, 7% kamay fikirin” waxay ku samayn lahaayeen lacagta.
Agaasimaha Bandhigga WTM ee London Simon Press ayaa yiri: "Kani waa muusig dhegaha warshadaha safarka. Mid nasiib badan shantii ka mid ah Boqortooyada Midowday (UK) hadda waxay isu arkaan inay dhaqaale ahaan ka fiican yihiin sidii ay ahaan jireen ka hor Covid, sababtoo ah waxay leeyihiin 'keydka shil' iyo deynta guriga oo hooseeysa.
"Dadku waxay inta badan ku xayiran yihiin gudaha bilo badan dhammaadka, cilmi-baaristan waxay na tusaysaa inay ka xanuunsan yihiin aragtida afarta darbi.
Halkii ay lacag ku bixin lahaayeen hagaajinta guriga ama mashiinka dharka cusub ee dhalaalaya, kaliya waxay rabaan inay ka baxaan oo ay ka faa'iidaystaan ​​​​nolosha hadda xannibaadaha ayaa fududeynaya. Maxaa ka wanaagsan in aad ka fogaato waxaas oo dhan ka badan in aad ballansato fasax?
"Waxaan horay u ognahay inay jirto baahi loo qabo safarrada dibadda iyo meelaha ay aadi doonaan midba midka kale si uu ugu tartamo si uu u soo jiito kharashaadka kuwa lacag haysta si ay u gubaan oo ay u badan tahay inay ka ganacsadaan oo ay ku dhuftaan fasaxooda soo socda .
"Waxa intaa ka sii badan, iyadoo 7% dheeraad ah ay yiraahdeen kama fikirin waxa ay ku sameyn doonaan lacagtooda dheeriga ah, shirkadaha safarka waxay ku jiri karaan jeex xitaa ka sii weyn oo ah keega dabaysha ee Covid-ka ah."